Qingdao Aedis အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
micro Flow အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး
linear Flow အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး
soft Flow အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး
Power က Flow အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး
nozzle Flow အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး
ရပ်ဆိုင်းမှု options များ
Aedis အထည်အလိပ်ပိုက်လုံးဒီဇိုင်းများနှင့်အခန်းပေါင်းနှင့် applications များအမျိုးအစားအားလုံးကိုအတွက်မူကြမ်း-အခမဲ့လေကြောင်းဖြန့်ဖြူးဘို့ (အသေးစိတ်လေ့အထည်အလိပ်ပြွန် / ပြွန်ခြေအိတ် / Sox အဖြစ်လူသိများ) အထည်အလိပ်လေဝင်လေထွက်စနစ်တွေကိုရောင်းချပါတယ်။
Aedis အထည်အလိပ်ပိုက်လုံးသည် 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပထမဦးဆုံးထည်ပြွန်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အ ထိုအချိန်မှစ. တရုတ်တွင်အကြီးဆုံးထည်ပြွန်ထုတ်လုပ်သူသို့လာခဲ့သည်။
Aedis အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး Qingdao, တရုတ်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်ဖြေရှင်းချက်တူအောင်ဖန်တီးဖို့နဲ့ထည်ပြွန်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပူဇော်ရန်၎င်း၏အတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာများအားဖွင့်အဆင့်မြင့်တွက်ချက်မှု software ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါကရုံး 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ကတည်းကအောင်မြင်စွာတရုတ်တစ်လျှောက်လုံးက၎င်း၏လွှမ်းခြုံတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး 2012 ကနေကျနော်တို့တချို့ HVAC ထုတ်လုပ်သူ '' ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထည်လေကြောင်းပြွန်တင်ပို့ဖို့စတင်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏လေကြောင်းရန်ပျံ့နှံ့မှုစနစ်ဒီဇိုင်းစီးပွားဖြစ် 3d software ကိုသုံးပါ။ မည်သို့ပင်ဒီဇိုင်းရှုပ်ထွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုဖြစ်စဉ်များပစ်မှတ်အပေါ်နှင့်အချိန်ပေါ်ပေးပို့အာမခံပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှုထောင့်နှင့်စီးပွားရေးအားသာချက်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်စနစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေထုပျံ့နှံ့မှုစနစ်မကြာခဏထည်စနစ်များသို့သမားရိုးကျသတ္တုပြွန်ပြောင်းသူကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဗိသုကာ, developer များနှင့်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်အတူလူကြိုက်များရရှိထားသူရတဲ့အကြောင်းရင်းတချို့ရှိနေပါတယ်။ သတ္တု၌ပြစ်မှားမိနိုင်ဘာမှထည်၌ပြစ်မှားမိစေနိုင်သည်။
အထည်အလိပ်လေကြောင်းအရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားနေတဲ့အစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ FabricAir ရဲ့စနစ်၏ပေါ့ပါးသောသဘာဝ applications များမျိုးကွဲများအပါအဝင်တစ်အရေအတွက်ကစံပြစေသည်။ ရွက်ဖျင်တဲများနှင့်ပြပွဲခန်းမများနှင့် retrofitting တည်ဆဲအဆောက်အဦးများကဲ့သို့အယာယီအဆောက်အဦများ။ Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအရည်အသွေးတွေအားကစား Arena, natatoriums စက်မှုမီးဖိုချောင်နှင့်မသမားရိုးကျသတ္တုပြွန်သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းချက်ရှိပြီးဘယ်မှာအနည်းဆုံးအအေးနှင့်ခဲ applications များအတွက်ကြောင့်အကျယ်လူကြိုက်များစေ။ အဆိုပါကျန်းမာရေးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆန့်ကျင်ပိုးမွှား option ကိုအစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့, အစားအစာသိုလှောင်မှုနှင့်ဆေးဝါးပလီကေးရှင်းကသာလွန်စေသည်။ ထိုအခါ bespoke စီးဆင်းမှုမော်ဒယ်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသက်သာသမားရိုးကျသတ္တုစနစ်များဖို့မိုးလုံလေလုံရာသီဥတုသာလွန်ပါစေ။
ထည်ပြွန်အသုံးပြုခြင်းဆိုထောင့်နှင့်အတူတစ်ဦးလေကြောင်းပျံ့နှံ့မှုစနစ်ကိုဆိုလိုသည်, မည်သည့်အရှည်နှင့်မည်သည့်ချင်းတပ်မက်လိုချင်သော။ အဲဒီမှာသူကတံတောင်ဆစ်ချိုးမှကြွလာသောအခါအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်လျော့ချဖြစ်ကြသည်နှင့်အ-off ယူပါ။ သငျသညျသတ္တုပြွန်ကိုပြုကြမယ်လို့ဘာမှထည်၌ပြစ်မှားမိ, ပြီးတော့တချို့နိုင်ပါသည်။ ထည်ပြွန်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးမဟုတ်သည်အတိုင်း, ထည်လေကြောင်းအရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားစနစ်များကိုသမားရိုးကျသတ္တုပြွန်ထက်သာလွန်များမှာဘယ်မှာ applications များများစွာရှိပါသည်။ အထည်အလိပ်ပြွန်သတ္တုပြွန်သာအစိတ်အပိုင်းလျော့နည်းဆူညံ, ငွေ့ရည်ဖွဲ့အခမဲ့နှင့်အလေးချိန်ရှိပါတယ်။
ပြွန်အရောင်များအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအစီအစဉ်မှကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်ကြောင့်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပိုပြီး print ထုတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြွန်ထိုနည်းတူအပေါ်အထူးအပေါ်ယံပိုင်းဥပမာရေနံတွန်းလှန်, Anti-ပိုးမွှားကုသမှု, Anti-ငြိမ်ကုသမှုနှင့်အတူကယ်နှုတ်တော်မူ၏နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွယ်စုံ system ကိုဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
သတ္တုပြွန်ကျော်ထည်စနစ်များနောက်ထပ်အားသာချက်လေဝင်လေထွက်ဇုန်အတွက်ဆောကျအဦသက်သာခြင်း၏အဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထည်သုံးပြီးအင်ဂျင်နီယာမျှမူကြမ်းမရှိငွေ့ရည်ဖွဲ့မျှဆူညံသံနှင့်မျှမတို့သေလွန်သောသူတို့သည်ဇုန်နှင့်အတူမည်သည့်ပေးထားသောအာကာသများအတွက်စံပြစီးဆင်းမှုပုံစံကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အတှေ့အကွုံအအေးအလုပ် enviroments မှာ FabricAir အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားစနစ်များကို အသုံးပြု. န်ထမ်းအကြားနည်းပါးလာနေမကောင်းကာလ၏ကဆက်ပြောသည်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်, နှင့်ပြွန်စနစ်၏ Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးကျန်းမာရေးသဘာဝတွေဖြစ်တဲ့အသားအပြောင်းအလဲနဲ့အပင်အဖြစ်အအေးနှင့်ခဲအဆောက်အဦ၌သာလွန်စေသည်ပြသခဲ့သည်။
အထည်အလိပ်လေကြောင်းအရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားစနစ်များလည်းအထည်အလိပ်လေဝင်လေထွက်စနစ်များ, ထည်ပြွန်, ပြွန်ခြေအိတ်, ဒါမှမဟုတ် Sox အဖြစ်လူသိများ, သူတို့၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်မူကြမ်း-အခမဲ့, ငွေ့ရည်ဖွဲ့-အခမဲ့, noiseless, ချေး-အခမဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်တူ core ကိုအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ကျော်ကြားတဲ့ဖြစ်ကြ၏။ FabricAir အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားစနစ်များ applications များမျိုးကွဲများအပါအဝင်၏ကျယ်ပြန့ကိုဖုံးလွှမ်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်အစားအစာ, အားကစား, စက်မှု, လက်လီနှင့်အများပြည်သူဒေသများ, ပညာရေး, ရုံးများနှင့်နှစ်သိမ့်နှင့်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်း။ application များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
နေရပ်လိပ်စာ: အဆောက်အဦး B6 ဟာ, Lingang အမှတ် 1 လမ်း, Huangdao ခရိုင်, Qingdao, တရုတ်, 266500
E-mail ကို: henry.cheng@aedisduct.com